Budata Eurocopter X3 v1 X-Plane 10 - Rikoooo
Helicopter X3 (otu isi rotor nwere ụyọkọ ise, ndị na-agbagharị abụọ nwere eriri ise) Modeling Version 1.0 nke X3 Eurocopter maka X-Plane 10.
Gụnyere French akwụkwọ.
Ọrụ bụ isi a na nke a ngo bụ iji nyere ndị na-enwe nke na-efe efe a helikopta na ọhụrụ a technology. The ụgbọ elu nlereanya e kere na iji parameters chọrọ site ụgbọelu Onye kere (na-enweghị plugins).
N'akụkụ propellers ekwe ka ọtụtụ imekotaotuugbo ọrụ na-esikwu na mgbochi torque, dị ka ọ na-eme eme.
Dị ka ụfọdụ ule mere site Rikoooo, kwalite asụsụ ọma na kokpiiti-apụghị ịhụ anya ma ọ bụrụ na plugin "Gforce" na-nyeere. Agbalị ịhụ na ọ bụrụ na i nwere otu nsogbu.
Ụfọdụ ọmụma na-abịa site data: engine NH90 The cabins nke Dauphin / EC 155, X3 agbaziri e ji mara.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, a payware version (v2) dị na x-plane.org ụlọ ahịa. Rikoooo-enweta enweghị ọrụ na ahịa.
The Eurocopter X3 (akpọ "X-cube") bụ ibuo CMG arụpụtara site Eurocopter.
X3 demonstrator nwere ihe abụọ turbines na ụgbọala site na otu gia igbe na a kehoraizin rotor agụba 5 na abụọ ịghasa propellers arụnyere na stumps nke nku.
Nke a bụ nzukọ nke a cell Dauphin na a nnyefe isi Eurocopter EC 175 na abụọ ọzọ ndapụta maka ụgbọ mmiri propellers. The propulsion na-nyere site abụọ engine NH90 apụta-Royce / Turbomeca ndị RTM322 na jikọọ site a propela aro. (Wikipedia)
Onye edemede: Jean-Pierre BARIL, Jean-Marc Tercier